FarfallaFRC-847S Automatic ထမင်းပေါင်းအိုး (1.8 Liters) - ငွေရောင်/အနက်ရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Farfalla FRC-847S Automatic ထမင်းပေါင်းအိုး (1.8 Liters) - ငွေရောင်/အနက်ရောင်
FRC-847S Automatic Rice Cooker
FRC-847S Automatic Rice Cooker>>>It's very good to use for those who is busy with their works. It is also easy to clean.
Farfalla Automatic Rice Cooker သည် အချိန်ပြည့်ပူနွေးနေစေရန် စီမံထားပြီးအလိုလျောက် တိကျသေချာစွာ အပူချိန်ထိန်းညှိပးနိုင်သောကြောင့် ချက်ပြုတ်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်လွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ချက်ပြုတ်မည့်အိုးမှာလည်း တူးကပ်ခြင်းများ မရှိစေရန်စီမံထားသောကြာင့် ဆေးကြောသန့်ရှင်းရလွယ်ကူမြန်ဆန်စေပါသည်။ ထမင်းချက်နေစဉ်အတွင်းမှာပင် အစားအစာများ နွှေးခြင်း၊ ပေါင်းခြင်းများလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် FRC-847S Automatic ထမင်းပေါင်းအိုး (1.8 Liters) - ငွေရောင်/အနက်ရောင်
ငွေရောင် နှင့် အနက်ရောင်